Xayeysiin Fursado Shaqo Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka | Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud, Jamhuuriyadda Federalka Soomaalia
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka (XIGQ), waa xafiis xubin ka ah hay’adaha garsoorka, u madaxbanaan shaqooyinkiisa, muhiimna u ah dawladnimada, dabaqidda Xeerarka iyo Shuruucda Dalka iyo sarreynta sharciga. Waa xafiis adeeg lagama maarmaan ah siiya shacabka Soomaaliyeed. Waxaa waajibaadkiisa iyo Masuuliyadihiisa ka mid ah:
Dacwo-oogista, ka hortagga iyo katabatagga Danbiyadda;
Hagista baarista dacwadaha ciqaabta ah ee Dalka iyo maxkamadayntooda;
Ilaalinta iyo dhowridda Xuquuqaha kala duwan ee mawaadiniinta Soomaaliyeed;
Xaqiijinta sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka Xeerarka Dalka iyo fulinta go’aamada sharci ah ee ka soo baxa hay’adaha Dawladeed ee kala duwan;
Kormeeridda xaaladdaha nololeed iyo ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee maxaabiistu leeyihiin; iyo
Xaqiijinta Xuquuqda agoonta iyo dadka nugul iyo Ilaalinta Danta Guud ee
Haddaba, si uu xafiisku u guto waajibaadkiisa balaaran waxaa baahi loo qabaa in la qaato xubno Xeer Ilaaliyayaal cusub oo ka ka qaybqaata taabbagalinta hawlaha loo igmaday. Habqaadashadan waa mid dhexdhexaad ah, hufan daahfuran oo cadaalad ku dhisan.
Shuruudaha looga baahan yahay xubnaha u tartamaya Xeer ilaaliyayaasaha waa inay:
Muwaadiniin Soomaali yihiin;
Haystaan ugu yaraan darajada koowaad ee jaamacad la aqoonsan yahay oo la xiriirta qaanuun, ama qaanuun iyo shareeco; iyo
Leeyihiin ugu yaraan laba (2) sano oo khibrad la xiriirta qaanuunka;
F.G. Haddii uu qofku haysto shahaadada darajada labaad ama tan saddexaad, waa laga dhaafi karaa khibradda shaqada.
Kaliya cidda shuruudahaa buuxin karta, waxay arji uu la socdo sawirkoodu u soo qoran karaan Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyagoo soo raacinaya nuqul shahaadooyinka iyo taariikh nololeedkooda oo Af-Soomaali ku qoran.
Waxayna ilaa 10ka Luulyo saacadda Afrikada Bari 5ta galabnimo u soo gudbin karaan emailka:
Arjiga ka dabamara wakhtigaa la cayimay lama aqbalayo. Wixii faahfaahin ah kala xiriir isla emailkaa.